आखिर किन हुन्छ जिन्स पाइन्टमा छोटो गोजी ? पक्कै देख्नु भएको होला । - ramechhapkhabar.com
आखिर किन हुन्छ जिन्स पाइन्टमा छोटो गोजी ? पक्कै देख्नु भएको होला ।
आखिर किन हुन्छ जिन्स पाइन्टमा छोटो गोजी ? पक्कै देख्नु भएको होला । आजकालाको समयमा मानिसहरु जिन्सलाई एउटा फेसनको रुपमा लिन्छन । जिज्न्सा लगाउनु एउटा रहरको साथसाथ यसले आफ्नो स्टाटसलाइ पनि देखाउछ । जिन्स कपडा एक त लामो समयसम्म टिक्छ भने यसमा धेरै फाइदाहरु पनि छन् ।
आज हामी जिन्स कपडा संग जोडिएको केहि तथ्यहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौं , जुन कुरा ९०% मानिसहरु गलत बुझ्ने गर्दछन । पक्कै पनि तपाइले देख्नु भएको होला जिन्स पाइन्टको अगाडिको गोजीको सिधा माथि एउटा सानो गोजी हुन्छ , यो किन बनिएको होला ?
कोहि मानिसहरु भन्छन , यो सानो गोजी सिक्का पैसा , चाबी वा कुनैपनि सानो सामानहरु जुन हराउन सक्छ त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि बनाईएको हुन्छ , तर स६य कुरा त धेरै फरक छ । आउनुहोस अब जानौं के छः त यसको रहस्य पहिले पहिले जिन्सको प्रयोग सुनको खानीमा काम गर्ने मजदुर हरुले गर्ने गर्थे , किनकी यो कपडा बलियो र लामो समयसम्म चल्ने गर्थ्यो
त्यसबेला मजदुरहरुको पाइन्टको साइडमा सानो गोजी उनीहरुलाइ पकेट घडी राख्नको लागि बनाइएको हुन्थ्यो । त्यस समयमा न त आजको जस्तो मोबाइल थियो न त हातमा बाँध्न मिल्ने खालको हाते घडी नै , त्यसैले उनीहरुलाई समय हेर्न सक्ने पकेट घडी सजिलो गरि राख्नको लागि बनाइएको हुन्थ्यो ।
ओठमा जिब्रो लगाउने बानी, ओठ चुस्ने वा चाट्ने बानी छ भने तत्काल हटाउनुस् । साथै ओठमा मह दल्नु भयो भने पनि ओठ फुट्दैन । त्यसैगरी घ्यु र नरिवलको तेल लगाउँदा पनि ओठ फुट्नवाट बच्न सकिन्छ । पानी धेरै पिउनुभयो भने पनि यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ । जाडो मौसममा सुन्तला, बदाम सेवन गर्दा पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
बाहिरी वातावरणमा जानु पर्दा लिप जेल, लिप गार्ड वा लिपस्टिक लगाउँदा पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । कहिले काँही रोगका कारण पनि ओठ फुट्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार जाडो मौसममा थाइराइड, इन्डोक्राइन जस्ता ग्रन्थीमा समेत रगतको मात्र कम भएर त्यसको परिणामस्वरूप ओठ फुट्न सक्छ ।